यामाहाले ल्यायो दुई नयाँ स्कुटर : यस्ता छन् विशेषता, कति पर्छ मूल्य ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अटो > यामाहाले ल्यायो दुई नयाँ स्कुटर : यस्ता छन् विशेषता, कति पर्छ मूल्य ?
यामाहाले ल्यायो दुई नयाँ स्कुटर : यस्ता छन् विशेषता, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौं । यामाहा नेपालले विशेष सुविधासहितका दुई नयाँ स्कुटर बजारमा ल्याएको छ । यामाहाले रे जेट आर १२५ एफआई र फ्यासिनो १२५ एफआई मोडलका नयाँ स्कुटर नेपालमा लन्च गरेको हो ।
नेपालमा एफआई इन्जिनको पहिलो स्कुटर यामाहाले लन्च गरेको थियो । यी स्कुटर नेपाली बजारमा अत्याधिक रुचाइएको कम्पनीको दाबी छ । अहिले नेपाली बजारमा यसको माग उच्च रहेको कम्पनीको दाबी छ ।
कम्पनीले यसवर्ष नै बजारमा ल्याएको रेजेटआर १२५ (एफआई टेक्नोलोजी विएस सिक्स) स्कुटरको माग पनि अत्याधिक भएको यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता एमएमडब्लु इन्टरप्राइजेजका विक्री प्रवन्धक राम बोगटीले बताउनुभयो ।
एफआई टेक्नोलोजी नेपालमा २००८ सालमा लन्च भएको हो । यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरु एफआई टेक्नोलोजीमा आइरहेका छन् । एफआई र यामाहा पर्यावाची जस्तै रहेको उहाँको तर्क छ ।
एफआई टेक्नोलोजीकै कारण यामाहा सफल भएको प्रवन्धक बोगटीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एफआई स्कुटर ग्राहकको रोजाईमा रहेको र अत्याधिक मात्रा माग हुने गरेको छ । अहिले यामाहाले रेजेटआर १२५ (एफआई र डिक्स) दुई स्कुटर ल्याएको हो ।
रे जेटआर १२५ एफआई
रे जेटआर १२५ नेपालमा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट फिचरसहितको स्कुटर भएको कम्पनीको दाबी छ । स्कुटरको क्षेत्रमा यो एक नम्बर माइलेज र उत्कृष्ट फिचर छ । रेजेटआर १२५ एफआई बिएस–भिआईलाई २ लाख ६१ हजार ९ रुपैयाँ पर्छ । त्यस्तै, फ्यासिनो १२५ एफआई बिएस २ लाख ५६ हजार ९ सय रुपैयाँ पर्छ। यसले माइलेज र पिकअप राम्रो दिन्छ ।
डिजिल डिसप्ले रहेको यस स्कुटरको विशेष सुविधा भनेको ट्राफिक जाममा स्कुटर रोकिदाँ पनि आफै स्टार्ट बन्द हुने र स्टार्ट गर्नुपरेमा एक्सिलेटर बढाए मात्रै पुग्छ । जसका कारण इन्धन समेत खपत हुनेछ । स्टार्ट पनि एकदम स्मूथ रहेको छ भने बिना आवाज नै स्टार्ट गर्न सकिन्छ । यसको साइट स्टेण्ड कटअप स्वीच पनि छ । जसले दुर्घटनाकोे खतरा बाट पनि बचाउँछ ।
२०७७ चैत्र ११ गते १६:५२ मा प्रकाशित
गृह मन्त्रालयको फेरि आयो यस्तो निर्देशन !
भर्खरै आयो लाइसेन्सको नतिजा, नामावली हेर्नका लागि यस्तो छ सजिलो तरिका
आउँदो आइतवार सिभिल बैंकको साधारण सभा हुँदै
चौरी गोठले करोडपति बने कान्छा गुरुङ
अब पाँच प्रतिशत ब्याजमै सजिलैसँग चाहे जति कर्जा पाइने
भूकम्पले भत्काएका आठ सय ९५ गुम्बाको पुनर्निर्माण गरिदै